पहिलो मधेशी प्रधानमन्त्री वन्लान् महन्त ठाकुर ? – Kendra Khabar
पहिलो मधेशी प्रधानमन्त्री वन्लान् महन्त ठाकुर ?
२०७७, २० चैत्र शुक्रबार ०९:००
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसपाको साथ लिएर सत्ता टिकाउन खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्ने देखि रेशम चौधरीलगायतलाई रिहाई गर्नेमा बालुवाटारले सकारात्मक सन्देश दिइसकेको छ । चौधरीको मुद्दालाई सत्ताको सौदावाजी बनाउन नहुने भन्दै जसपाभित्र एकाथरीले महन्थ ठाकुरलगायतको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
ओलीइतरको सत्ता समिकरण बनाउन पनि जसपा नै निर्णायक शक्ति बनेको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले जसपा तिरै ध्यान दिएको छ । तर, यसपटक जसपाले सरकारकै नेतृत्वको दाबी गरेको स्पष्ट भइसकेको छ ।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सत्ताभन्दा मुद्दा प्राथमिक भन्दै आएका छन् । तर, सत्तामा गएर मुद्दा सम्बोधनमा लाग्ने जसपाको ध्यान गएको देखिन्छ । विशेषगरी जसपा नेताहरु महन्थ ठाकुर र डा।बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीका दाबेदार छन् । त्यसमा पनि ठाकुरको पल्लाभारी छ ।